Umhla My Pet » Ngomhla kujuba – Ngaba ukuthandana online indlela ekunene ukuya?
ukubuyekezwa: Oct. 20 2020 | < 1
Ukuba kutshanje ndigqithile lentlungu, uthandana online indlela efanelekileyo zingahambi? Ukuqalisa bephuma ehlabathini ndithandana emva ulwalamano amaxesha akukho lula. Ukuba phezu buya kuba nzima, kodwa la macebo apha ukuze uhlale ukhuselekile!
Mna esithi babalahle yonke into ubuthandana, kodwa ongeze intanethi yakho iprofayili ubuthandana. Abantu bafuna ukwazi ukuba umtshato, ezahlulwe, ongumhlolokazi etc. Esithi into efana, "Mna entsha ukuthandana ihlabathi online" lungile ukusebenzisa xa amatsha kulo. Wonke entsha ngexesha elinye!
Kanye ihlabathi kweintanethi, ndithandane kwiiwebhsayithi lizele abakhohlisayo, amaxoki, etc. Lumka xa ujonge iiprofayili nokuphendula imiyalezo. Ukuqalisa phandle nokuba phezu buya kunokukhokelela kuwe ukuba sesichengeni wonke umntu oya kuninika ingqalelo. Oku kunokubangela ingxaki ukuba asilumkanga.
Musa zonke iinkcukacha zakho
Kukho isizathu iinkonzo ukuthandana intanethi ugcine kakhulu izinto ezifihlakeleyo. Athenjwe umntu kuthatha ixesha. Ziphe ixesha ukuze ukwazi umntu phambi kokuba uyazi inombolo yefowuni yakho, ngokuba uya kuzisola kamva.
Ngaba Umhlobo Jonga Kule ezinokwenzeka
Ukuba unomdla ngokwenene umntu, yaye buya, khangela nomhlobo olungileyo ukuba ukhetho usenza okulungileyo. Abahlobo kunokuba nabath- ngaphambi kokuba wenze iimpazamo ezinkulu.